Cittasukha Parahita Youth စိတ္တသုခ ပရဟိတလူငယ်: May 2007
စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ်တို့ ဇွန် ၁၄ရက် သွားလှူတဲ့အခါမှာ
စစ်ကိုင်း မြရတနာရပ် အမှတ်(၂၅) အမက ကျောင်းကို အရင်သွားပါမယ် . .
အဲဒီမှာ လှူဒါန်းခြင်း အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ပါမယ် . . .
ကျွန်တော်တို့ ကံတလူဘုရားကို သွားပါမယ် . .. အဲဒီက အပြန် ကောင်းမှုတော် ဘုရားဝင်ပါမယ် . . .
အချိန်ရရင် တောင်သမန် ဦးပိန်တံတား ၀င်ပါမယ် . . . .
ကြားထဲ မှာ ထမင်းစားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ် . .
အခုတော့ လူ၅၀ဆံ့တဲ့ ကားငှားဖို့ ပြောထားပါတယ်
ကားခကို အားလုံး ကျသင့်သလောက် စုပြီး ပေးကြပါမယ် . ..
ထမင်းစားတာကိုလည်း အဲလိုပါပဲ ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ်ပေါ့ . .
အလှူရှင်ပေါ်ရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့ . . .
အလှူငွေထဲက တတ်နိုင်သမျှ အသုံးစရိတ်ကို မသုံးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် . ..
မနက်ဖြန် ကျွန်တော်တို့ စစ်ကိုင်း အမက (၂၅)ကို ရောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် . . .
အဲဒီကျမှ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ စာရင်း အတိအကျ တင်ပေးပါ့မယ် . . .
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 9:13 PM0comments Links to this post
စစ်ကိုင်းမြို့၊ မြရတနာရပ်က အမှတ်(၂၅)အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း
ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၁၅၀ ခန့်ရှိပါတယ် . .
အခုတော့ ပျောက်ကင်းသွားတဲ့ ရောဂါဆိုး . . .
ပါဝင်လှူဒါန်းမယ်ဆိုရင် ဘလော့မှာ ၀င်ရေးခဲ့လည်းရပါတယ် ........
နောက်မေးလ်ပို့လည်းရပါတယ်ဗျာ . .
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 8:03 AM 1 comments Links to this post
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 7:56 AM2comments Links to this post
၂၀၀၆-ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ညမှာ အောင်တော်မူဘုရားမှာ ဆီမီးထွန်းကြတယ် .....
နှစ်စဉ်သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ညတိုင်းမှာ အောင်တော်မူဘုရားမှာ ဆီမီးထွန်းကြတာပါ .....
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 7:53 AM 1 comments Links to this post
ဆင်းရဲနွမ်းပါးဝေဒနာရှင် မစန်းစန်းမြင့်အား ဆေးကုသစရိတ် ၅၀၀၀၀(ငါးသောင်းကျပ်) ကူညီပေးခဲ့ပါတယ် ....
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 4:24 PM0comments Links to this post
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 4:19 PM Links to this post
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 4:19 PM0comments Links to this post
မြစ်ငယ်ရေးဘေးသင့်မိသားစုများအား ထမင်းထုပ်၊ ဆန်၊ အ၀တ်အစားများ စုစုပေါင်း (၁၀)သိန်းကျော်ဖိုး လှူဒါန်းပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ(၁၈)ရက်၊ အောက်တိုဘာလ(၂၀)ရက်၊ နိုဝင်ဘာလ(၃)ရက်နေ့တွေမှာ စုစုပေါင်းသုံးကြိမ်လှူဒါန်းခဲ့ကြတာပါ။
၂၀၀၆-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၁၈)ရက်နေ့က ထမင်းထုပ်များဝေငှကြပါတယ်။
၂၀၀၆-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၂၀)ရက်နေ့က ဆန်ဝေငှကြပါတယ်။
၂၀၀၆-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၃)ရက်နေ့က ဆန်ဝေငှကြပါတယ်။
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 4:07 PM0comments Links to this post
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 3:56 PM0comments Links to this post
၂၀၀၆-ခုနှစ်၊ ဇွန်လ(၁၈)ရက်နေ့က ပြင်ဦးလွင်မြို့ ဘိုးဘွားရိပ်သာ နဲ့ ဆရာတော်ဦးဉေယျ ပရဟိတ မျက်မမြင်ကျောင်းသို့ ငွေကျပ် ၂၇၁၅၀၀ လှူဒါန်းပါတယ်။
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 3:48 PM0comments Links to this post
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 3:42 PM0comments Links to this post
(၁) မိဘမဲ့ ခိုးကိုးရာမဲ့ ကလေးသူငယ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသော ပရဟိတကျောင်းများ၊ ဌာနများ။
(၂) ခိုကိုးရာမဲ့ အဘိုး၊ အဘွားများအား စောင့်ရှောက်ထားသည့် ဘိုးဘွားရိပ်သာများ။
(၃) ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့တဲ့ ချို့ယွင်းသူများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများအား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည့်ှ ဌာနများ။
(၆) မသန်စွမ်းသူများစောင့်ရှောက်ရေးဌာနများ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနများ။
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 3:27 PM0comments Links to this post
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 3:16 PM0comments Links to this post
စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ်ဆိုပြီး မန္တလေးက လူငယ်တွေစုပေါင်းပြီး အလှူလုပ်ကြတယ် .......
Posted by စိတ္တသုခ-ပရဟိတလူငယ် at 3:08 PM0comments Links to this post